Arụ ọrụ ịde blọgụ: Ntinye ndepụta maka WordPress
Laa azụ na BlogIndiana 2010, anyị mere mkpọsa dị nro maka ngwa mgbakwunye WordPress iji nyere aka dịkwuo ọrụ arụpụtaghị. A na-akpọ ya Ndepụta Ndepụta Ọgụgụ, ọ dabere na ike a na-apụghị ikwenye ekwenye ma dị ịtụnanya nke ndepụta nyocha.
Ndepụta Ndenye Blogging bụ naanị ihe ọ na-ada ka ọ: ọ na - emepụta ụyọkọ igbe maka iji mee ihe mgbe ị na - ede blọgụ. O doro anya, ị nwere ike nweta otu ihe ahụ na akwụkwọ Okwu ma ọ bụ biputere ya na ndetu, mana site na itinye nke a na ngwa mgbakwunye WordPress, enwere ike ịhazi ya ma jiri ya rụọ ọrụ. Lee ihe ọ dị ka ya:
Ọ bụ ya! Ewezuga, n'ezie, ị nwere ike ịhazi ihe ndị ahụ iji nweta ihe ọ bụla ịchọrọ. Ndepụta nyocha ahụ gosipụtara na ebe kachasị baa uru n'echiche, na peeji nke Dezie Post n'onwe ya. Ya mere, ka ị nọ ide a post, ị nwere ike n'ezie lelee anya ihe na ndepụta.
Izinghazi ndepụta ahụ dịkwa mfe. Ikwesighi ịmara HTML ọ bụla. (Ọ bụ ezie na ịnwere ike iji ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ.) Lee peeji nke njikwa ha:
Ebumnuche nke ngwa mgbakwunye abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị mpempe ọkọ. Enweghị data ọ bụla echekwara, nke bụ kpọmkwem ịchọrọ. E kwuwerị, a ga-eme nyocha nyocha iji gosi na ị mere ihe niile edepụtara. Nke a nwere ike ịgụnye usoro ndị dị ka “ọsọ ịba ọghara” ma ọ bụ “itinye foto foto” ma ọ bụ ikekwe “ịnwale njikọ ndị na-apụ apụ.” Ihe ndị a niile bụ ihe ị ma gị kwesịrị -eme oge obula ị blog, ma na nke a plugin ị nwere ike na-echetara ime ha ọ bụla oge. Nke kachasị, onye ọ bụla n'ime ndị edemede gị ga-ahụ otu ndepụta ahụ, na-eduga n'ịdị na-agbanwe agbanwe, ọkwa dị elu.
Ọ bụ n'efu na akụkụ nke ebe nchekwa WordPress mgbakwunye. Chọọ maka “gingde blọgụ Ndepụta Ndepụta” na nke gị WordPress nwụnye, ma ọ bụ gaa na peeji gọọmentị.
Ndepụta ndepụta obi ụtọ!
Tags: Analyticsbizmarketingakara ngosi facebookmicrosoft Ọnọdụ crmpr nkesaregex
75 Mkpebi Nchịkọta Afọ Ọhụrụ nke 2011
Naanị Anyị Ji Ngwa Bara Uru Anyị Ga-eji